Facebook အပါအဝင်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် app များ ရုတ်တရက်ရပ်တန့် – BNN
facebook instagram အပါအဝင် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် application များဖြစ်သော whatsApp စသည်တို့သည် ယနေ့ည ပိုင်းတွင် တပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြု၍မရတော့ကြောင်း ကို ဖေ့ဘွတ်သုံးစွဲသူများထံမှသိရသည်.
အသုံးပြုသူများ၏ပြောကြားချက်များအရ ဖေ့ဘွတ် ကိုဖွင့်ချိန်တွင် error message သာပြနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရသည် ဟုဆိုသည်.
၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်ကုမဏီဘက်မှ ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ချက်မျိုး ကိုတော့မတွေ့ရှိရသေးပေ.
မြန်မာ နိုင်ငံတွင်သာမက အခြားသော နိုင်ငံများတွင်ပါ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဖေ့ဘွတ်ခ် နှင့် ဆက်စပ် app များရပ်တန့်သွားမှု အတွက် ဖေ့ဘွတ်ခ်သည် တွစ်တာ ပလက်ဖောင်းမှ နေ၍ တောင်းပန်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းက ကျနော်တို့ရဲ့ facebook app အပြင် အခြားဆက်စပ် appတွေ ကို အသုံးပြုသူအချို့ဝင်ရောက်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အချို့အရာတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းအမြန်ဆုံးပြန်ဖြစ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်၊ အဆင်မပြေမှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဟုရေးသားထားသည်။
source: the newyorktimes
FB အစုရှယ်များထိုးကျ-နာရီပိုင်းအတွင်း ဒေါ်လာ ၇ ဘီလျံဆုံးရှုံး